Nike + Run Club gadziriso: isu tinogona kuenda kunomhanya neiyo chete Apple Watch | Ndinobva mac
Iko kubatana pakati peApple neNike pakabatana kusundira pamwe neApple Watch inomhanya app kuri kubhadhara. Kusvika ikozvino, mamwe mabasa echishandiso aida kuti iPhone ishande. Asi lIko kunyorera kwakura uye hakudi kutsamira uku pane iyo iPhone. Naizvozvo, kumhanya neApple Watch yedu ichiwedzera kufanana nemawachi emhando dzakasarudzika mukumhanya nemitambo yemarudzi ese. With iyo nyowani nyowani yeNike + Run Kirabhu, inotibvumidza kuyera kureba, kumhanya uye mamwe ma parameter, Pasina kutakura iyo iPhone newe.
Iko kushandiswa kunoramba kuri kuri nyore uye kunzwisisika. Mabasa echishandiso anoitwa pasina kuve neApple foni iripo. Iye zvino tinogona kuratidza nhanho pamakumbo kana nguva dzekumhanya, nekungodzvanya kaviri zvakateedzana paApple Watch. Mukupesana, izwi-pamusoro pemurairidzi basa rinoda ingangoita iyo iPhone yezvino.
Yekushandisa yekuvandudza meseji inotizivisa nezve zvinotevera:
Izvi ndizvo zvitsva mushanduro 5.7.0 kwatange takabatikana. Tarisa uone zvigadzirwa zvedu zvazvino.
Speed ​​kumhanya asvika. Iwe unogona ikozvino kumaka zvikamu uye mapeti uchishandisa iyo inomhanya yekumhanyisa ficha pane wachi yako - pombi mbiri pane chikuru skrini panguva yekumhanya kutara zvikamu
ZVINOKOSHA: Izvo zvinodikanwa kupa mvumo iyo NRC kuti iwane chitsungo y Basa Rekugwinya kuitira kuteedzera mujaho
Kuti uwane mhinduro dzakanakisa paApple Watch, zvinokurudzirwa kushandisa watchOS 3.2.2 kana kupfuura.
Pamusoro pezvo, zviputi zvakagadziriswa uye kuvandudza kutsva kwakabatanidzwa.
Kuti uwane zvimwe zvakagadziriswa uye matipi, shanya nrc.nike.com
Tine iyo nyowani nyowani inowanikwa muchitoro cheapp, yechero Apple wachi, Apple Watch Series 2 uyezve, iyo Apple Watch Nike +. Mune akateedzana 1 zvinokwanisika kugadzirisa, asi isu tinofanirwa kutora iyo iPhone nesu sezvo isina GPS
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Nike + Run Club gadziriso: tinogona kuenda kunomhanya neApple Watch chete
Ndiri mutsva pano.
Kana isu tichimhanya nezvikamu zvenguva yekuzorora, izvo zvakasara zvinoverenga seimwezve nguva kana kuti nhangemutange inofanirwa kumbomiswa?
Dhizaini yakasarudzika uye yepakutanga Flyers ane aya mazana maviri matemplate eiyuro imwe chete